K: International Human Rights Day
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး နေ့
ပထမ အကြိမ် ဂျူးလူမျိုး များကို ဖမ်းဆီးသောအခါ
ကျွန်ုပ် ဘာတခွန်းမျှ မဟ
ကျွန်ုပ် က ဂျူးလူမျိုး မဟုတ်သည့်အတွက်....
နောက်..ကွန်မြူနစ်များကို ဖမ်းဆီးရန် ရောက်လာပြန်
ကျွန်ုပ် ဘာတခွန်းမျှ မပြောပါ
ကျွန်ုပ် ကွန်မြူနစ် တယောက် မဖြစ် ခြင်းကြောင့်....
နောက်တဖန်.... အလုပ်သမား သမဂ္ဂ၀င် များ အပေါ်
ကျွန်ုပ် စကားတခွန်းမျှ မဆို
ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ၀င် မဟုတ်သောကြောင့်....
ယခု..ကျွန်ုပ်ကို ဖမ်းဆီးရန် လာကြပါပြီ
သို့သော်... ကျွန်ုပ်အတွက် ပြောဆိုဘို့ တဦး တယောက်မျှ မရှိတော့....။
[ Pastor, Martin Niemoller]
( ဒီနေ့ ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး နေ့အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်.. အင်္ဂလန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသော လူ့အခွင့်အရေး လက်စွဲ ဗမာပြန်စာအုပ်မှ ....)
U know why nobody leavesacomment. Cos' nobody stands for others. Believe me.